Goobo caafimaad oo lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka oo laga sameeyey xerayaha barakacayaasha ee xaaladda Wadajir Galkacyo. – Radio Daljir
Oktoobar 13, 2011 12:00 b 0
Galkacyo, Oct 13 – Waxaa maanta iskuulka Al-shacab ee xaafadda Wadir ee magaalada Galkacyo maanta lagu qabtay xaflad aad u ballaaran oo xarigga looga jayey xarumo caafimaad oo laga hirgaliyey xerayaha dadka barakacayaasha ah ee hoos-taga maamulka Gal-mudug.
Xafladdaan oo ahayd mid lagu maamuusayey mara-dhalka mashruuc dhinaca caafimaadka ah oo muddo laga waday kaamamka ay deggan yihiin dadka tabaalaysan ee ku dhaqan xaaladda Wadjir ee magaalada Galkacyo ayaa lagu daaf-furay todobo xarumo caafimaad oo lagu dayeeli doono hooyada iyo dhallaanka.
Munaasabadda xarumahaasi caafimaad lagu furayey waxaa ka soo qayb-galay mas?uuliyiin kale duwan oo ka tirsan maamulka Gal-mudug sida wasiirka caafimaad iyo xubno heer gobol ah, saraakiil ka socotay hay?adda UNFPA oo ah hay?addii maalgalisay mashruuca caafimaad iyo sidoo kale xubno iyana ka socday hay?adda SBACO oo fulisay qorshaha hirgal ee mashruuc caafimaadeedkaasi.
Hinda Cabdi Muuse, oo ah madax mashaariicda hay?adda SBACO ayaa war-bixin dheer oo ay halkaasi ka jeedisay waxaa ay kaga hadashay tallaabooyinka lagu hirgaliyey xarumahaan caafimaad ee lagu xannaanaynayo hooyada iyo dhallaanka, loona taabbo-galiyey danyarayaasha ku dhaqan Wadajir, deggan kaamamka lagu soo barakacay, iyadoo sidoo kalena ka hadashay baahidii dhalisay.
Hinda, waxaa kaloo ay ka xog-warantay hababkii dadaal ee loo soo maray hirgalinta adeegyadaasi caafimaad, iyadoo dhinaca kalena muujisay muhiimadda ay bulshada u leeyihiin gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka oo ah kuwa ugu nugul marka daruufo caafimaad darro ay yimaadaan.
Madaxdii iyo marti sharaftii kaleeto ee lagu marti qaaday daaf-furka xafladdaasi oo uu ka mid ahaa wasiirka caafimaad maamulka Galmudug ayaa iyana si durugsan uga hadlay axmiyadda iyo qiimaha ay u leeyihiin bulashada xarumahaan fulinaya adeegyadaan caafimaad, iyagoo dhinaca kalena wax ka taabtay dayaca iyo daryeel la?aanta xagga caafimaadka ah ee haystay kaamamka haatan loo sameeyey goobaha caafimaada.